China BLN5560 Fascia Gun engaphandle Rotor BLDC Motor Ukwenziwa kunye Factory | Staba
I-BLN5560 Fascia Gun Ingaphandle yeRotor ye-BLDC yeeMoto
Igama lemveliso: I-Fascia Gun Ingaphandle yeRotor ye-BLDC yeMoto
Umzekelo No .: BLN5560
Ikaliwe Amandla: 37W
Ixabiso elilinganisiweyo: 24V DC
Isantya esikaliwe: 3111 RPM
Iimbonakalo: I-Torque ephezulu / Ukuqina okuphezulu / Ingxolo ephantsi / Ubomi obude
Inkcazo Akukho Mthwalo Ukusebenza okuphezulu Max Isiphumo Power
Isantya (RPM): 3,720 3,116 1,978
Okwangoku (A): 0.36 2.1 6.4
Imveliso yamandla (W): 0 37 80
Qaphela (V): 24 24 24
I-BLN5560 Fascia Gun Outer Rotor BLDC Injini yenzelwe ngokukodwa eyenzelwe izixhobo zoMbane ezisempilweni zoMbane kubomi bethu banamhlanje. I-BLN5560 BLDC Motor yenziwe nge-100% Cooper Winding kwaye ngenkqubo yokuvelisa engqongqo ephezulu enokunceda ekunciphiseni ukukhathazeka kwemisipha kunye nokuqina. I-BLN5560 Fascia Gun Outer Rotor BLDC Motor yiTorque ePhakamileyo, Ukuqina okuPhezulu, ukuSebenza okuGqwesileyo, Amandla amakhulu, Ukusetyenziswa kombane osezantsi, UkuThula okuPhezulu, kunye nokuPhila ixesha elide.
Ngu-Staba's BLN5560 Outer Rotor BLDC Motor, iFascia Massage Gun iya kunciphisa ingxolo eninzi, ibonelele ngefuthe elaneleyo kwizihlunu ezinzulu zemisipha, kwaye yandise ubomi bayo benkonzo.
I-BLN5560 BLDC Motor isebenzisa i-Chip yoqobo kunye nomjelo we-MOS ukubonelela nge-7A ubuninzi beMithwalo yangoku kunye nokunciphisa amandla kunye nengxolo. I-Staba Eco FOC yoLawulo lwe-BLDC yeMoto yeFascia ineSantya esiPhezulu, siSebenza ngokuPhezulu, kwaMandla aKhulu, kunye neempawu zokuSebenzisa eziPhantsi.
Egqithileyo I-BLN8520 isantya esiphakamileyo soMatshini oQhekeza uBld Motor
Okulandelayo: I-BL6141 Icwecwe langaphandle leROTDC yeFan Motor
Isisombululo seFascia Gun Motor
Zeziphi izixhobo ezithandwayo zokuphumla kwezihlunu kwizangqa zomzimba namhlanje? IFascia Gun, ewe. Ngexesha lokuzilolonga kakhulu, izihlunu zethu ziya kuvelisa umothuko omncinci, ngexesha lokulungiswa kwemisipha, amaqhuqhuva amancinci aya kwenziwa, okwaziwa ngokuba zi "ndawo zentlungu" Ezi maqhuqhuva amancinci ziya kunyusa i-viscosity ye-fascia kwaye ziqine, zichaphazele indlela yesenzo kunye nokuthintela ukuhanjiswa kwe-nerve kunye nokuhamba kwegazi. Intshukumo inokuvelisa iindlela zembuyekezo yangoku, ke kuya kufuneka ukhulule umsipha kunye nefascia emva kokwenza umthambo. Umpu wazalelwa kule ndawo.
Umahluko kwimassager yesiqhelo kuhlobo lwasekhaya, i-massage yeFascia Gun ibuyisela izihlunu zomzimba ngongcangco olunamandla oluphezulu (ubuncinci be-1800d / min, ubuninzi be-3200d / min) yokuthambisa. Phantsi, nciphisa kakhulu iintlungu kunye nokuphazamiseka emva kokuzilolonga. Oku kungenxa ye-24V High-Power Brushless Motor esetyenziswa yiFascia Gun, imoto yeFascia Gun enezixhobo ezijikelezayo. Xa i-massage ikhululekile, inokungena kwi-10mm yamaqela emisipha engaphantsi, kwaye ngokulandelelana ityumle i-asidi ye-lactic eveliswe emva kokuzilolonga, Izisa amava okuphulula angena emzimbeni.
Okwangoku, uninzi lwezithambisi zeFascia Guns kwimarike zisebenzisa i-brushless motor engaphandle ngerabha enesakhiwo esijikelezayo. Umpu we-fascia uneengxaki ze-Heavyweight kunye neNgxaki, uBomi obufutshane beMoto, ukuQiniseka kweBhetri, kunye nengxolo ephezulu. Onke amanqaku eentlungu ezahlukeneyo zokuphathwa ngesandla kweFascia Guns kwimarike esele ikho.
Kulwakhiwo lokumodareyitha kweFascia Gun, ingxolo sisalathiso esibalulekileyo sovavanyo lwekhwalithi yemoto kwaye ikwayinto ebalulekileyo ekubhekiswa kuyo kubasebenzisi ekuthengeni iimveliso. Ngaphantsi kwesiseko sokuqinisekisa ukusebenza kunye nobomi beemoto, indawo yethu encinci Isisombululo seFascia Gun Brushless DC seMoto isebenzisa ubuchwepheshe obutsha kunye nezinto ezintsha ukoyisa rhoqo itekhnoloji yokunciphisa ingxolo, ukuze ingxolo yokusebenza ye-Fascia Gun motor ingaphantsi kwe-45dB. Isisombululo seFascia Gun Motor sineempawu zesayizi encinci kunye neTorque ePhakamileyo, enciphisa ubunzima beFascia Gun. Qaphela ukusetyenziswa kwesandla esinye ngabathengi, okwenza kube lula ukuthambisa.
I-Staba Motor ineminyaka engaphezulu kwe-10 yamava kubunjineli bokwenza ulwenziwo, ngakumbi kwisicelo seFascia Gun esiqokelelene kwisiseko sedatha enkulu yemoto ekubhekiswa kuyo kubathengi okanye ukhetho, isilawuli sokudibanisa okanye isincoder, ngokukhawuleza ngokweemfuno zabathengi ukwenza isisombululo semoto ukuhlangabezana okanye ukugqitha kwimfuno zabathengi . I-Staba Motor ibingumboneleli weemoto othembekileyo kunye nomenzi ukusukela ngo-2009. Ngolwazi oluthe kratya kwiFascia Gun BLDC Motor Solution, Nceda unxibelelane nathi eStaba Motor.
I-Brushless DC yeMoto yeFascia Gun
Imoto engenabhrashi yeFascia Gun
I-Eco BLDC Imoto yeFascia Gun
Ulawulo lweMoto yeFOC yeFascia Gun
Imoto yeFOC yeFascia Gun
Ukuqina okuphezulu kweBMDC yeFascia Gun
Ukuqhuba kakuhle kweMoto ye-BLDC yeFascia Gun
Isantya esiphezulu seBlDC Motor yeFascia Gun
I-Torque ephezulu ye-BLDC yeMoto yeFascia Gun
Ubomi obude be-BLDC Motor yeFascia Gun
Ukusetyenziswa okuphantsi kweBlDC yeMoto yeFascia Gun
Ingxolo ephantsi yeBlDC yeFascia Gun
BLN3857 Massage Electric Pillow BLDC Motor
Sihlalo we-BL5560 woSihlalo wombane we-BLDC
Ivacuum yococa, I-BLDC yeFan Motor, Imoto, Imoto yeBLDC, I-Brushless Motor, I-DC engenazithuthi, yophando pricelist